Neutrinos: kedu ihe ha bụ, njirimara, mkpa na ịmata ihe | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ụmụ irighiri ihe ndị na-apụ apụ. Anyị na-ezo aka neutrinos. Ndị a bụ ahụrụ ndị akọwapụtara na mbụ maka oge izizi na 30 site n’aka onye ọkammụta lekwasịrị anya na piziks physics akpọrọ Wolfgang Pauli. Ha siri ike ịchọpụta ihe dị iche iche ebe ọ bụ na ha anaghị esokarị ihe nkịtị.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a ịgwa gị njirimara niile, mkpa na ịmata ihe nke neutrinos.
2 Seta ndị neutrinos ahụ
3 Neutrino ịmata ihe
Enwere nkọwa mere ihe ndị a ji sie ike ịchọpụta. Ma ọ bụ na ha bụ irighiri irighiri ihe ndị na-anaghị esoro ihe nkịtị eme ihe. Ọzọkwa, ha nwere obere obere ihe na ọkụ eletrik na-anọpụ iche, ya mere aha ha. Ha bụ ahụ enwere ike ihu na mmeghachi omume nuklia ma ghara inwe mmetụta. Ike ndị ọzọ anaghị emetụtakwa ha dịka electromagnetic. Naanị ụzọ ị ga - esi soro neutrinos na - emekọrịta ihe bụ site n'ike nke ike ndọda na obere mmekọrịta nuklia na-esighi ike. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ha bụ ihe ịchọ ịmata ihe nke dọọrọ uche ọtụtụ ndị sayensị nke lekwasịrị anya na pix fisiks.
Iji chọpụta neutrinos, ọ ga-adị mkpa imepụta mpempe akwụkwọ ndu nke ọkpụrụkpụ nke otu afọ ọkụ iji hụ na ọkara nke neutrinos ndị a gafere na ya nwere ike ịdaba iji nwude ha. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na ọ siri ike ijide neutrino. Iji kọwaa nke a, anyị na-ahụ na n'ime sekọnd abụọ ọ bụla oge gafere ọtụtụ nde ihe ndị a gafere ụwa anyị na anyị onwe anyị n'egbughị oge. Ha na onye ọ bụla ọzọ anaghị emekọrịta ihe, ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ha na-emegide ya.
Seta ndị neutrinos ahụ
Neutrinos nwere ike gosipụta site na iji usoro ọkọnọ. Dịka ụkpụrụ ndị a ga-adị mkpa iji wuo mpempe akwụkwọ na-ebute ụzọ (9,46 × 10)12 km iji nwee ike ijide ọkara neutrinos gafere ya. N'agbanyeghi otu ndi mmadu na-achoghi taa, anyi nwere otutu nlebara anya nke ichoputa ha. A maara otu n'ime ememe ndị a dị ka Super-Kamiokande nke Japan ma bụrụ ezigbo igwe. Thelọ nche ahụ dị na Hida, agwaetiti kasị ukwuu na agwaetiti Japan.
E wuru Super-Kamiokande n'ime olulu dị otu narị kilomita. Obserlọ nche a nwere akụkụ nke mita 40 dị elu na 40 mita n’obosara. Mpịakọta a yiri nke ụlọ dị okpukpu iri na ise. Naanị ị ga-ahụ nha nke ụlọ nyocha nke achọrọ iji mee ka ọ bụrụ flax iji ghọta ihe isi ike dị n'ịchọpụta ha.
N'ime ụlọ nyocha ahụ, anyị ahụghị ihe ọzọ na ihe na-erughị tọn 50.000 nke mmiri nwere oke ịda ogbenye nke tubes photomultiplier 11.000 gbara gburugburu. Igwe foto a bụ ụdị sensọ na - enyere anyị aka ịhụ neutrinos ka ha na - agabiga na mbara ụwa anyị. Ọ bụghị na ị nwere ike ịhụ ndị a neutrinos ozugbo, ma i nwere ike na-edebe Cherenkov radieshon ha na-emepụta mgbe ha na-agafe na mmiri. Mmiri bụ ihe na - eduzi ihe na mmiri dị ka ihe mgbaze nke ụwa. N'ihi ihe ndị e ji mmiri mee, anyị pụrụ ịhụ radieshon nke ndị na-eme ka mmiri na-anaghị akwụsị akwụsị mgbe ha gafere.
Neutrino ịmata ihe
Ihe kacha dị ịtụnanya gbasara ihe ọhụụ a bụ na ndị sayensị na-arụ ọrụ n’ime ụlọ nyocha a ma nwee ọtụtụ nchọta. Ihe nchoputa ndia bu na site n’iji obere mmiri na obere mmiri di ocha, i nwere ike ichoputa ndi ozo n’aghaghachila n’ebe di anya. Nke ahụ bụ ịsị, Ihe ndị a nwere ike ịhụ n'ụdị mmiri a sitere na nnukwu supernova.
Ọcha adịghị ọcha nke agbakwunyere na mmiri iji nwee ike iji anya nke uche hụ neutrinos ndị a bụ gadolinium. Ọ bụ ihe mejupụtara kemịkal nke otu obere ụwa nwere mmetụta na etinye ya na mmiri. Mmetụta a na-eme ka onye nyocha nwee mmetụta dị ukwuu iji nwee ike iji anya nke uche hụ ụzọ nke neutrinos. Ndị na-eme nchọpụta na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ a gbakwunye tọn 13 nke ogige gadolinium guzobere na mmiri dị ọcha. Nke a na - eme ka ngụkọta mkpokọta nke mmewere a pụta na 0.01%. Concentrationta a dị mkpa iji nwee ike ịkọba mgbaama nke ndị na - adịghị ike na - adịghị ike ma si otú a nwee ike ịlele ha.
Nwere ike iche na ihe kpatara ndị sayensị ji eme mgbalị a niile iji mụọ mmasị karịa. Ma ọ bụ na, ọ bụ ezie na anyị ekwenyeghị na ya, ha bụ ngwaọrụ dị mkpa nke nwere ike inye anyị nnukwu ozi gbasara supernovae. Supernova bụ ihe mgbawa na-eme ihe ike nke na-eme na kpakpando ndị ahụ na-enweghị ike iguzogide nrụgide ahụ n'ihi mmebi nke electrons. Ihe omuma a di nkpa ka amara nke oma banyere nhazi nke uwa.
Neutrinos na-agba ọsọ dị oke nso na ọsọ nke ọkụ. Anyị maara na ọ dịghị ahụ nwere oke nwere ike ịga ọsọ ọsọ nke ọkụ. Yabụ, nke a na-egosi na ndị nwere oke mmadụ nwere oke ahụ. Ekele dịrị nke a, enwere ike ịkọwa usoro mmemme elementrị elementrị. Mkpa ọ dị mkpa ka ndị neutrinos nwee ihe kwesịrị ekwesị dị ukwuu. Nke a pụtara na ndị nwere oke nwere oke ha anaghị adabara n'ụdị ihe atụ nke ihe ahụ gbasara usoro gbasara physics. Oge gboo physics Model physics bụ ihe mgbe ochie ma ọ dịkwa mkpa mgbanwe ụfọdụ.
Eziokwu ahụ bụ na ndị nwere oke oke na-akọwa ọtụtụ ihe. Ekwesiri iburu n'uche na usoro ihe omumu nke physics nwere n'etiti 14 na 20 aka ike ma obu ihe adighi nma maka sayensi ugbu a. Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị neutrinos nwere nnukwu mkpa n’ụwa nke kịtịktisiz physics na ihe ọmụma nke ụwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe neutrinos bụ, njirimara ha na mkpa ha maka ụwa nke sayensị na mbara igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » neutrinos